China PP စုတ်တံအမျှင်များပြုလုပ်သည့်စက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
PP စုတ်တံ အမျှင်များပြုလုပ်သည့်စက်ကို မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် PP monofilament ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
PP ဘရိတ်အမျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်လိုင်းသည် အဝတ်လျှော်ခန်းစုတ်တံ၊ ဖိနပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် PP monofilament ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် အမျှင်များ၊ ဇစ်ဂျစ်ဖြတ်ထားသော အမျှင်များ၊ အစိုင်အခဲမျှင်များ၊ အခေါင်းပေါက် အမျှင်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PP အမျှင်များသည် အားကောင်းသော ခိုင်ခံ့မှု၊ ပျော့ပျောင်းမှု၊ တောက်ပသောအရောင်ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော အမျိုးမျိုးသော စုတ်တံများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
မတူညီသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း စိတ်ကြိုက် PP စုတ်တံချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မော်ဒယ် ZYLS-75 ZYLS-80 ZYLS-90
ဝက်အူ L/D ၃၀:၁ ၃၀:၁ ၃၀:၁
ဂီယာဘောက်စ် မော်ဒယ် 200 200 200
ပင်မမော်တာ 18.5kw 22/30kw 30/37kw
စွမ်းရည် (kgs/h) 80-100 ကီလိုဂရမ် 100-120 ကီလိုဂရမ် 120-140 ကီလိုဂရမ်
Mold Dia 200 200 200
Filament Dia 0.18-2.5mm 0.18-2.5mm 0.18-2.5mm
2. ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံရန်အတွက် စက်အားလုံး၏ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
3. အရည်အသွေးမြင့် စုတ်တံအမျှင်များကို သေချာစေရန် ရင့်ကျက်သော လုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှု
4. ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ စက်တစ်ခုလုံး လိုင်းအမှားရှာခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။
5. သင့်အား စိတ်ချမ်းသာစေမည့် တစ်ခုတည်းသော ဝန်ဆောင်မှု
ကြမ်းပြင် သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက် စုတ်တံ ၊ အဝတ် သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ ၊ ကား သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ ၊ သစ်သီး နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ ၊ ဖိနပ် သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ ၊ နို့ဘူး စုတ်တံ ၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင် သန့်ရှင်းရေး ဖြီး .
>> PP စုတ်တံအမျှင်များပြုလုပ်သည့်စက်
ယခင်- OEM/ODM ထုတ်လုပ်သူ China PBT မိတ်ကပ် Brush Fiber Monofilament ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: မိတ်ကပ် Brush ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အရည်အသွေးမြင့် တရုတ်အယောင်ဆောင် ဖိုက်ဘာစက်ကို OEM/ODM ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပုလင်း Brush Filament စက်
Bottle Brush Filament ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Brush Bristle စက်
Brush Bristle ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Brush Fiber Extruding စက်
Brush Fiber စက်
Brush Filament Extruding စက်
Brush Filament စက်
Brush Filament Making စက်
Brush Filament ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Brush ချည်မျှင် Extruding စက်
Brush ချည်မျှင် Extrusion Line
Brush Yarn ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပလပ်စတစ် PET PA နိုင်လွန်ဇစ်ချည်မျှင် mac...